गर्भनिरोधक साधन पिल्सको खाँदा के साच्चिकै महिलाको तौल बढ्छ ? – Ap Nepal
April 9, 2021 954
मानिसहरुले अनिश्चित गर्भ रोक्नको लागी पिल्स प्रयोग गर्दछन् । किनभने यसलाई एक परिवार नियोजनको भरपर्दो अस्थायी साधन मानिन्छ । तर महिलाहरु पिल्स खाएइपनि आफुमा परिवर्तन भएको महसुस गर्दछन् । चिकित्सकहरुको अनुसार कसैले पिल्स खाएपनि आफ्नो तौल बढेको भन्दै आउने गरेको छन् । के साच्चिकै गर्भनिरोधक साधन पिल्स खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? जान्नुस्
गर्भनिरोधक अस्थायी साधन पिल्स २ प्रकारको हुन्छ । एक कम्बिनेशन पिल र अर्को मिनिपिल । पहिलो कम्बिनेसन पिलमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेसटिन दुई प्रकारका हर्मोन हुन्छन् ।दोस्रोमा प्रोजेसटिन मात्र हुन्छ । त्यसैले पिल्सले तौल बढाउँदैन ।
एक चर्चित ‘द जर्नल अफ विमिन्स हेल्थ’ मा प्रकाशित समाचार अनुसार महिलाहरुमा पिल्सले कुनै पनि असर नगर्ने जनाएको थियो ।
त्यस्तै यसबारे भारतकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुराधा शर्माको अनुसार गर्भनिरोधक साधन पिल्स खादा महिलाहरुको तौल नबढ्ने बताइन् । यदि पहिलो पटक पिल्स खादा शरिरमा केही हर्मोनल परिवर्तन भएर हल्का शरिर सुनिन्छ । त्यसका साथै स्तनको तन्तुमा परिवर्तन भएर स्तनको आकारमा वृद्धि हुने बताइन् । त्यसैले उनले सबै महिलाहरुलाई पिल्सले शरिरको तौल नबढ्ने भएकाले ढुक्क भएर खान सुझाव दिएकी छिन् ।
।मानिसहरुले अनिश्चित गर्भ रोक्नको लागी पिल्स प्रयोग गर्दछन् । किनभने यसलाई एक परिवार नियोजनको भरपर्दो अस्थायी साधन मानिन्छ । तर महिलाहरु पिल्स खाएइपनि आफुमा परिवर्तन भएको महसुस गर्दछन् । चिकित्सकहरुको अनुसार कसैले पिल्स खाएपनि आफ्नो तौल बढेको भन्दै आउने गरेको छन् । के साच्चिकै गर्भनिरोधक साधन पिल्स खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? जान्नुस्
Prevशुद्ध मह खानुका फाइदै-फाइदा भनिन्छ यस्ता रोग`हरु च्वाट्टै पार्छ महले हेर्नुहोस्
Nextसुन्दरताको कारण भाई रल बनिन् कान्तिपुर टिभीकी समाचार वाचिका श्री पाण्डे (फोटो फिचर)
सोनु सुदले नेपालकी मुस्कान कर्णको आजीवन पढाई खर्च व्यहोर्ने -सोनु गरे यस्तो पोष्ट